Markhaatiyaasha Yehowah Waa Dad Sidee ah?
Maanta Doonista Yehowah Yaa Sameynayo?
KU AKHRI Abbey Afrikaans Ahanta Aja Akha Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Morocco) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Attié Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bariba Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bembe Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Bulgarian Sign Language Bété Cambodian Carib Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chinese (Cantonese) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Comorian (Ngazidja) Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Fang Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Ghomálá’ Gitonga Gokana Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guerze Guianese Creole Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Huave Huichol Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Itawit Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lambya Laotian Lari Latgalian Latvian Latvian Sign Language Lega Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Mano Manyawa Mapudungun Marathi Mari Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mbunda Medumba Mende Meru Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nahuatl (Veracruz) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nepali Sign Language New Zealand Sign Language Ngabere Ngangela Ngbandi (Northern) Ngiemboon Nias Nicaraguan Sign Language Nicobarese Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga Nsenga (Mozambique) Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Phimbi Piaroa Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Pomeranian Ponapean Portuguese Portuguese (European) Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Russian Russian Sign Language Rutoro Rwandan Sign Language Réunion Creole Saint Lucian Creole Salvadoran Sign Language Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Soomaali South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Taabwa Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai (Northeastern) Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tyrewuju Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruguayan Sign Language Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xavante Xhosa Yacouba Yapese Yemba Yombe Yoruba Zambian Sign Language Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ma taqaannaa dad Markhaatiyaasha Yehowah ah? Malaha waxaannu nahay deriskaaga ama dad kula shaqeeya ama iskuulka kula dhigta. Waxaa dhici karta inaan Kitaabka ka wadahadalnay. Laakiin yaannu nahay? Maxaanna bulshada uga sheegnaa rumaysadkeenna?
Dad caadi ah baan nahay. Waxaan ka nimid bulshooyin iyo xaalado kala duwan. Qaar naga mid ah diimo kale bay ka tirsanayeen kuwana Ilaah maba aammini jirin. Haddaba kulligeen si fiican baan u barannay tacliimaha Kitaabka Quduuska ah intaannan Markhaatiyaasha Yehowah noqon. (Falimaha Rasuullada 17:11) Markaan aqbalnay waxyaalaha aan barannay si shakhsi ahaan ah baan u doorannay inaan Ilaahay Yehowah caabudno.
Barashada Kitaabka Quduuska ah way inoo wanaagsan tahay. Sida binuʼaadanka oo dhan waxaan la kulannaa dhibaatooyin iyo itaaldarro. Laakiin waxaannu aragnaa inay barashada Kitaabka wanaajiso nolosheenna markaan isku dayno inaan addeecno. (Sabuurradii 128:1, 2) Taasi waa mid ka mid ah sababaha aan dadka ula qaybsanno waxyaalaha wanaagsan aan Kitaabka Quduuska ah ka barannay.
Waxaan u noolnahay siduu Ilaahay rabo. Wuxuu Ilaahay ina baray Kitaabka Quduuska ah bay ku jiraan oo way ina caawiyaan sidaan u helno nolol farxad leh. Dad raxmad badan oo daacad ah inaan noqonno bay ina baraan iyo inaan dadka kale ixtiraamno. Waxayna inaga dhigaan dad caafimaad qaba oo bulshada wax tara. Midnimada qoyska iyo damiirka dadka bay xoojiyaan. “Ilaah inuusan dadka u kala eexan” waan hubnaa saas awgeed rumaysadkeenna baan ku midownay oo walaaltinnimo caalami ah baan ka tirsan nahay. Walaaltinnimo ka xoreysan cunsurinimo iyo xuduudaha siyaasiga ah. Marka nala fiiriyo waxaannu nahay ummad gaar ah inkastoo aannu shakhsi ahaan nahay dad caadi ah.—Falimaha Rasuullada 4:13; 10:34, 35.
Markhaatiyaasha Yehowah sidee bay dadka kale ula mid yihiin?
Markhaatiyaasha Yehowah habkee buu Kitaabku baray inay u noolaadaan?
Wadaag Wadaag Markhaatiyaasha Yehowah Waa Dad Sidee ah?
Maxay Tahay Doonista Ilaahay?
CASHARKA 1 Markhaatiyaasha Yehowah Waa Dad Sidee ah?
CASHARKA 2 Maxaa Naloo Yiraahdaa Markhaatiyaasha Yehowah?
CASHARKA 3 Sidee Baa Runta Kitaabka Quduuska ah Dib Loogu Helay?
CASHARKA 4 Maxaan u Soo Saarnay Turjumaad Kitaabka?
CASHARKA 5 Maxaad ka Heli Doontaa Kulammadeenna?
CASHARKA 6 La Kulanka Walaalaheenna Sidee Buu Inoo Caawiyaa?
CASHARKA 7 Kulammadeenna Waa Sidee?
CASHARKA 8 Maxaan Kulammadeenna si Wanaagsan ugu Labbisanaa?
CASHARKA 9 Sidee Baan Kulammada si Fiican ugu Diyaargaroobi Karnaa?
CASHARKA 10 Caabudaadda Reerka Waa Maxay?
CASHARKA 11 Shirarka Waaweyn Maxaan u Aadnaa?
CASHARKA 12 Wacdiga Boqortooyada Sidee Buu u Abaabulan Yahay?
CASHARKA 13 Waa Maxay Horseed?
CASHARKA 14 Waxbarashadee Bay Horseedyada Helaan?
CASHARKA 15 Sidee Bay Odayaasha ugu Adeegaan Kiniisadda?
CASHARKA 16 Hawsha Caawiyayaasha Kiniisadda Maxay Tahay?
CASHARKA 17 Hoggaamiyayaasha Safro Sidee Bay Inoo Caawiyaan?
CASHARKA 18 Walaalaheen Silicsan Sidee Baan u Caawinaa?
CASHARKA 19 Waa Ayo Addoonka Aamminka ah oo Caqliga leh?
CASHARKA 20 Guddiga Maammulka Shaqadee Bay Maanta Sameeyaan?
CASHARKA 21 Beytel Waa Maxay?
CASHARKA 22 Laamaha Shaqadee Bay Sameeyaan?
CASHARKA 23 Sidee Baa Loo Qoraa oona Loo Turjumaa Wargeysyadeenna?
CASHARKA 24 Sidee Baa Hawsheenna Caalamiga ah Loo Maaliyaa?
CASHARKA 25 Hoolalka Boqortooyada Sidee Baa Loo Dhisaa Maxaana Loo Dhisaa?
CASHARKA 26 Sidee Baan uga Wada Shaqeyn Karnaa Hoolkeenna Boqortooyada?
CASHARKA 27 Maktabadda Hoolka Boqortooyada Sidee Baan uga Faaʼiidaysan Karnaa?
CASHARKA 28 Websitekeenna Maxaa Laga Heli Karaa?
Miyaad Sameyn Doontaa Doonista Yehowah?
Qoraal Liiska download gareyska wargeysyo digital ah Maanta Doonista Yehowah Yaa Sameynayo?
Audio Liiska download gareyska maqalka Maanta Doonista Yehowah Yaa Sameynayo?
Wadaag Wadaag Maanta Doonista Yehowah Yaa Sameynayo?